Semalt Spiega Perché Gli Esperimenti Mantengano In Vita La Tua Activités Di E-Commerce
E-commerce inotarisana nekuchinja kukuru mune zvose. Kutanga kwe virtualZvechokwadi mabhizimusi ezvokudya, mafoni ekubhadhara maitiro, SEO uye mitsva inowanzobuda mari inoratidza kuti ichava dambudziko kune vatsva vatsva nevakuru vatambi.
Vatengi vanoparadzwa nechisarudzo chemasangano anopiwa nevatenzi veIndanetimaduka. Kubudirira kwezvinhu zvitsva kwakagadziridza musuo wekudzoka uye kumhanya kwemashumiro - racing fashion winter. Nokudaro kushandiswa kwekombiyuta inochinja maitiro evatengi uye anosiya mapurisa ari paIndaneti nechinangwa chekuedza sezvinongova nzira chete yekupona.
Ivan Konovalov, nyanzvi ye Semalt Digital Services, inopa ruzivo rwokuti kuedza kunovandudza sei zvigumisiro mubhizinesi re e-commerce.
Bhizinesi rezvebhizimisi rinofanira kutora kuongorora nekukurumidza
Mikana iri mubhizinesi rekutsvaga inouya uye inokurumidza zvikuru. Sezvo chiitiko uye ruzivo yevashandi vedu kuratidzira, pane chido chekugumira nokukurumidza kwemikana iyo kunyanya kana kukwikwidzana kwekukwikwidzana kwakakwirira.
Vamwe vatengesi vakagamuchira pfungwa yekuongorora
Kunyange vatengesi vepaIndaneti vachiona ruzivo rwekuita zvikwereti zvakasimba panguva uye simba ravo kuti vave nekugona kutsvaga mazano matsva, vamwe vatengesi vakagamuchira dambudziko racho. Mune imwe nyaya ichangobva kuitwa neOptimizely uye eTail, Bhizinesi-Mhedzisiro yeChiratidzo 2017, 6 muzana yevakapindura vakatsigira kuti makumi maviri kubva muzana ekukurayebhizimisi ravo rekutsvaga inokonzerwa nekuedza..
Mazuva ekutenda mumatongerwo akaongororwa haatauri kushandayebhizimisi. Kurongedza nekuedza kunokurudzira kuwanikwa mumakambani emakambani ekuIndaneti anogona kukonzera kukwikwidzana kubva kune vamwe vatambiin the industry.
Kunzwisisa mikana inounzwa nedzidzo
Pane zvikonzero nei bhizinesi rekutsvaga yepaIndaneti risingakwanisi kukura kunyange nechikumbiroye SEO. Vanotya nokuti havabvunzi mibvunzo yakaoma, iyo inogara ichitungamirira pakuwana.
Kubudirira mabhizinesi havatyi kuisa mibvunzo yakadaro uye kuedza kuedza, izvo zvinoita kuti vawane mikana ichangowanikwa.Kubatsira kwekuedza ndiko kupindura mibvunzo yakasununguka inotungamirira pakuwana pasina kutya kwekukundikana kana kubudirira. Kusiyanakuedza zvinangwa izvi kugadzirisa nheyo iripo, kuedza kunoedza kuunza pfungwa itsva patafura nekutsvaga mugumisiroyehana yakapiwa.
Social Media Industry Nyaya yaMay 2017 yakaratidza 88 muzana yevatengesi vanodakusimbisa zvakanakira kushandisa shandisirano yehupfumi. Sangano reSeO, social media platforms rakanaka kune zvose zvirikuedza uyekuedza mazano. Kubatanidzwa kwekuedzwa uye kuedza kwemazano matsva inzira yakanaka kwazvo yekubudirira kubudirira paIndanetikushanda.
Unoda kuva nemoyo murefu
SaSeO, kushandiswa kwekuedza kana kuongororwa kwemashoko matsva uyemazano inzira inoda kushivirira kukudziririra kushivirira. Kuongorora kunotevera mamwe matanho ekubudirira. Ikokoinofanira kunge iri bhajeti, munhu ane chekuita nehutungamiri apo achishandisa MBO mukutengesa hurongwa inopa mabhonasi kuti aite zvakanaka.Kukoshesa chero chezviitiko uye wogovana ruzivo nevamwe.
Pamigumisiro yakanakisisa yekutsvaga, kuedza uye kuedza kunofanira kunge kwakanyanya uyetevera kudzokorora nokukurumidza nokukurumidza. Izvi zvinoita kuti kugadziriswa kwezvikanganiso uye kugadziridzwa kwezvirevo. Kuwana zvisingataurikimikana, kuedza, kudzidzira nekudzorera ndiyo nzira itsva yekugadzirisa inochengetedzwa nemaitiro eCommercebhizinesi.